PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: May 2014
မဖတ်ရသေးတဲ့ မိတ်ဆွေတွေအတွက် ယနေ့အကြိုက်ဆုံး ဆောင်းပါး
ကျွန်တော် ကြံ.ခိုင်ဖွံ.ဖြိုးရေးပါတီထဲသို.၀င်တော.မည် ။
ဘယ်သူတွေ ဘာထင်ထင် ကျွန်တော်ဝင်မည် ။ ဒီခေတ်မှာ နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခုတော.နောက်ခံရှိထားမှ ဖြစ်မည် ။ သူများတွေ ၀င်သော ပါတီထဲသို.လည်း အုတ်အရောရော ကျောက်အရောရော သူများလုပ်တိုင်း လိုက်လုပ်ကာ ရောတိရောရာ မလုပ်ချင် ။ ကိုယ်ထင်တာ ကိုယ်လုပ်တာကျွန်တော်.၀ါသနာဖြစ်သည် ။ ပြည်ထောင်စုကြံ.ခိုင်ရေးနှင်.ဖွံ.ဖြိုးရေးပါတီ ကိုကျွန်တော်ကြိုက်သည် ။ ယခင်ပါတီ ဥက္ကဌ ဦးသိန်းစိန်သည် လာဘ်မစားဘူးဟု နာမည်ကျော်ကြားသော Mr. Clean ဖြစ်သည် ။ ယခုပါတီ ဥက္ကဌဖြစ်သူ၊ သူရဦးရွှေမန်းသည် တိုင်းပြည်ေ ကာင်းအောင်လုပ်နိုင်မည်.သူ တစ်ဦးဖြစ်သည် ဟု ကျွန်တော်ယုံသည် ။ ထို.ကြောင်.ပါတီသို.ကျွန်တော် ၀င်မည် ။သို.သော် ကျွန်တော်သည် ဥာဏ်ရည်နုံနဲ.သူဖြစ်သည် ။ ကြံ.ခိုင်ဖွံ.ဖြိုးရေးပါတီနှင်.ပါတ်သက်လာလျင် ကျွန်တော် မရှင်းလင်းသော ၊ မည်သို.မျှ မစဉ်းစားတတ်သော ကိစ္စလေး အနည်းငယ်ရှိသည် ။
မေးခွန်း အနည်းငယ်ရှိသည် ။
ခုရှုပ်မှ နောင်ရှင်း ဆိုသလို ထိုကိစ္စများကို သက်ဆိုင်ရာ ပါတီခေါင်းဆောင်များမှ ကျွန်တော် သဘောပေါက် နားလည်လာအောင် ရှင်းပြနိုင်ပါက အလွန် ကျေးဇူးတင်မိပေမည် ။ ရှင်းပြမည်ဟုလည်း ယုံကြည် မျှော်လင်.ပါသည် ။ ထိုအခါ ကျွန်တော်သည် ပါတီထဲသို. ၀င်ရန်သာ ရှိပါတော.သည် ။
ပထမအချက် အနေဖြင်.ကျွန်တော် မေးလိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုကြံ.ခိုင်ရေးနှင်. ဖွံ.ဖြိုးရေးအသင်း နှင်.ပြည်ထောင်စုကြံ.ခိုင်ရေးနှင်.ဖွံ.ဖြိုးရေး ပါတီသည် အတူတူ ပဲလားဟူသောေ မးခွန်းဖြစ်ပါသည် ။အဘယ်.ကြောင်.ဆိုသော် ပြည်ထောင်စုကြံ.ခိုင်ရေးနှင်. ဖွံ.ဖြိုးရေးအသင်းသည် အစိုးရပိုင် အသင်းကြီး ဖြစ်ခဲ့သည် ။ အစိုးရပိုင် အသင်းဖြစ်စဉ်က အသင်းပိုင် ရုံးခန်းများ၏ မြေနေရာနှင်. အဆောက်အဦ အားလုံးသည် နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာငွေဖြင်. တည်ဆောက်ထားသော ရုံးခန်းများ ဖြစ်သည် ။ ထိုသို. နိုင်ငံတော်ပိုင် မြေနှင်.ရုံးများသည် အသင်းကြီးအဖြစ်မှ နိုင်ငံရေး ပါတီတစ်ခုအဖြစ်သို. ပြောင်းလဲလိုက်သောအခါ နိုင်ငံတော်ပိုင် ပစ္စည်းများကို နိုင်ငံတော်သို. ပြန်အပ်ရမည်ဖြစ်သည် ။ နိုင်ငံရေးပါတီ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတော်ပိုင် မဟုတ်သဖြင်. ယခင်နိုင်ငံတော်ပိုင် အသင်းကြီး၏ မြေနေရာ ၊ဘဏ္ဍာငွေ ၊အဆောက်အဦ ၊ လက်ကျန်ငွေ ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းစသည်များကို တစ်ခုမကျန် နိုင်ငံတော်သို.ပြန်အပ် ရပေမည် ။ ပြည်သူတို.၏ ချွေးနည်းစာဖြစ်သော နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာငွေသည် ပါတီတစ်ခုအတွက် သုံးလို.ရမရ ကျွန်တော်သိချင်သည် ။
ထို.ကြောင်. ကြံ.ခိုင်ရေးအသင်းကြီး၏ မြေများ ၊ တိုက်များ ၊ ရုံးခန်းများ ၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ကို ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီက မိဘအမွေသားသမီး ဆက်ခံသလို ယူလိုက်ခြင်းမှာ တည်ဆဲဥပဒေနှင်. ညီမညီ ၊နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင်.ဖွံ.ဖြိုးရေး ကောင်စီသည် ပြည်သူပိုင် ပစ္စည်းများကို နိုင်ငံရေး ပါတီတစ်ခုသို. ကိုယ်.သဘောနှင်. ကိုယ် ပေးပိုင်ခွင်.ရှိမရှိ ၊ ပြည်ထောင်စုကြံ.ခိုင်ရေးနှင်.ဖွံ.ဖြိုးရေးပါတီသည် နိုင်ငံပိုင် ပစ္စည်းကို ပါတီအတွက် လွှဲပြောင်း ရယူပိုင်ခွင်.ရှိမရှိ ကျွန်တော်သိလိုပါသည် ။
ဒုတိယသိလိုသည်မှာ အသင်းကြီးကို စတင်တည်ထောင်သူ နာယကကြီးဖြစ်သော အငြိမ်းစား ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွေ အကြောင်းဖြစ်သည် ။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီသည် ပြည်ခိုင်ဖြိုး အသင်းမှ ဆင်းသက်လာသည်ဖြစ်ရာ အသင်းကြီး၏ မူလ စတင်တည်ထောင်သူ တစ်ယောက်အကြောင်းကို ပါတီက ရှင်းပြနိုင်လိမ်.မည်ဟု ယူဆ၍ မေးရခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ ကျွန်တော်သိလိုသည်မှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ (ငြိမ်း) ယခုနေနေသော အိမ်တော် ဟုခေါ်သည်.နေပြည်တော်မှ မြေနေရာနှင်. အဆောက်အဦသည် သူချွေးနည်းစာဖြင်. လစာဝင်ငွေထဲမှ စုဆောင်းကာ ဆောက်လုပ်ထားခြင်းလော ၊ သို.တည်းမဟုတ်
Posted by PNSjapan at 9:01 PM0comments
ဂျပန်တွင် အသက် ၁၀ နှစ်ပြည့်မှ စာမေးပွဲ ဖြေရသည့် အကြောင်း
ကျောင်းတက်ရပါတယ်။ စာလုပ်ရပါတယ်။ သို့ပေမယ့် စားမေးပွဲ မဖြေရပါ ဘူး။ အကြောင်းကတော့ ကျောင်းတက်တဲ့ ပထမ ၃ နှစ်တာကာလရဲ့  မျော်မှန်းချက်ဟာ ပညာမဟုတ်ပဲ အကျင့်စာရိတ္ထဖြစ်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း ပထမ ၃ နှစ်အတွင်းမှာ စာ ထက် ကိုယ်အမူအရာ၊ နှုတ်အမူရာ၊ လူမှု ဆက်ဆံ ရေး အစရှိသဖြင့် ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ စာတွေ ကိုသာ အလေးပေး သင်ကြားပါတယ်။
ရည်ရွယ်ချက်ကလည်း အကျင့်စာရိတ္ထများ ကောင်းမွန်လာစေဖုိ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်တို့ ခံယူချက်က ပညာနဲ့ အကျင့်စာရိတ္ထ ယှဉ်ရင် အဓိက နေရာမှာ အကျင့်စာရိတ္ထက ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျောင်းနေအရွယ်က စလို့ ၃ တန်း အရွယ်အထိ ဘာစာမေးပွဲမှ မရှိပဲ အကျင့်စာရိတ္ထကိုသာ ပိုမို အလေးပေး သင်ကြားစေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
Posted by PNSjapan at 1:43 AM0comments
မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် TNLA တအာင်းတပ်မတော် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွါး
၃၀ ရက် မေလလ ၂၀၁၄ ခုနှစ်
တအာင်းဒေသ၊ နမ့်ဆန်မြို့နယ်၊ အနောက်ကင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဟိုနမ့်ကျေးရွာနှင့် ဇယန်း မန်မိုင် ကျေးရွာကြားတွင် ယနေ့ မေလ ၃၀ ရက် နံနက် (၀၁း၃၀) နာရီ အချိန်မှ (၀၁း၅၀) နာရီ အချိန်ထိ တအာင်းတပ်မတော်(TNLA) တပ်ရင်း (၂၅၆) နှင့် မြန်မာတပ်မတော် တပ်မ (၇၇) တို့ ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ် ပွါးခဲ့သည်။
တိုက်ပွဲတွင် တအာင်းတပ်မတော်ဘက်မှ ထိခိုက်ကျဆုံးမှု မရှိပါ။ မြန်မာ့တပ်မတော်ဘက်မှ ထိခိုက်ကျဆုံးမှု မသိရှိရသေးပါ။ တိုက်ပွဲနောက်ဆက်တွဲသတင်းအား ဆက်လက်တင်ပြသွားပါမည်။
တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းကို Bdnews24.com အပါအ၀င် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ အွိုင်လိုင်း သတင်းများတွင် ဖေါ်ပြသည်။
တိုက်ပွဲမှာ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံ စစ်တကောင်းတောင်တန်းနယ် နတ်ကျောက်ဆရီမြို့နယ် အနီးရှိ နယ်စပ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ အကျအဆုံး အထိအခိုက်ကို မသိရသေးကြောင်း BGB ဘင်ဒရိုဘင် ခရိုင် တပ်မှူး ဗိုလ်မှူးကြီး Col KM Saiful Islam က ပြောကြောင်း သတင်းများတွင်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှု နှစ်ပတ်လည် မေ ၃၀ ..........................
ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှု အတွင်း ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူများ ပြန်လည်ပြောပြချက်များ
ခရစ္စတီးကျွန်းတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ အမိန့်ဖြင့်
၁၉၉၈ ခုနှစ် မေ လအတွင်း ခရစ္စတီးကျွန်းတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ အမိန့်ဖြင့် အပြစ်မဲ့ အရပ်သူအရပ်သား များကို သတ်မိန့်ပေးခဲ့မှုကို ဘာအတွက်ကြောင့် အသတ်ခံခဲ့ရသည်ကို မသိရှိဘဲ သေသွားခဲ့ရသော မွေးကင်းစ ခလေးငယ်လေး အပါဝင်ခလေး(၃)ဦး နှင့် အမျိုးသမီးများ အပါအ၀င် လူစုစုပေါင်း (၈၁)ဦး ၏ ကိုယ်စား ကိုယ်တိုင် တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရမှု အဖြစ်မှန်ကိုတင်ပြလိုပါသည်။
အိန္ဒိယ တပ်မတော်မှပေးသည့် သတင်းမှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ရခိုင်တပ်မတော်၊ ကေအင်ယူ အဖွဲ့များသည်အိန္ဒိယအစိုးရအားဆန့်ကျင်နေသော သူပုန်များကိုရောင်းချရန် လက်နက်မှောင်ခိုများထံမှ ၀ယ်ယူခဲ့သော လက်နက်ကြီးငယ် အများအပြားကို ခရစ္စတီးကျွန်း ဧရိယာတွင် ၀ှက်ထားကြောင်း သတင်းပေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ သတင်းအရ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ မှ
မျက်နာဖုံးတွေ ကွာကျလာပီ .... အမေစု ဆီ ကော်မရှင်က ပို့တဲ့ သတိပေးစာ
သူတို့ တွေ့ ဆုံပွဲမှာ ဒီမိုကရက်တစ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်နိုင်ရေး ၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့တိုင်းရင်းသားများအားလုံးတန်းတူ ညီမျှရေးကိုအာမခံနိုင်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတခုပေါ်ပေါက်
3 May 2014 post by RFA
ကချင်ပြည်နယ်က စစ်ပြေးဒုက္ခသည်စခန်းတွေနားမှာ ချထားတဲ့ မြန်မာအစိုးရ တပ်တွေအားလုံး ရုပ်သိမ်းပေးဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာက သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ အခွင့်အရေး ကို မြန်မာ့တပ်မတော်က လေးစားလိုက်နာဖို့ ကချင်အရပ်ဖက်အဖွဲ့ အစည်း ၁၇ ဖွဲ့ က တောင်းဆိုလိုက် ပါတယ်။
မေလ ၂၀ ကနေ ၂၂ ရက်နေ့ ထိ မိုင်ဂျာယန်မြို့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အစည်းအဝေးအပြီး အခုလိုကြေညာ ချက်ထုတ် တောင်းဆိုလိုက်တာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလဆန်းက စပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်က စစ်ပွဲတွေကြောင့် စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ဦးရေ ၄ ထောင်ကျော် တိုးလာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် အဲဒီဒုက္ခသည်တွေကို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာ မပြုလုပ်ဖို့ ၊ သူတို့ တွေ နေရပ်ပြန်ရေးကို နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာမှု စည်းမျဉ်းတွေအရ ဆောင်ရွက်ဖို့ နဲ့အဲဒီနိုင်ငံတကာအဖွဲ့ အစည်းတွေရဲ့ ကူညီ
ရှမ်းပြည်နယ် တအာင်း ပလောင်နယ်မြေ ဖြစ်တဲ့ ကျောက်မဲမြို့နယ်၊ ကျောက်ဖြူ ကျေးရွာ အနီးမှာ၊ အစိုးရ စစ်တပ် တပ်မ ၇၇ ရဲ့ လက်အောက်ခံ တပ်နဲ့ တအာင်း အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး TNLA အကြား၊ ထပ်မံ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပေါ် ခဲ့ပါတယ်။
TNLA အဖွဲ့ရဲ့ ပျောက်ကြား စခန်းတစ်ခု ရှိရာကို၊ ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့ အစိုးရတပ်တွေနဲ့ တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတာ ဖြစ်တယ်လို့ တအောင်း လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့က တာဘုန်းကျော်က ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာ အစိုးရတပ်ဘက်က အကျအဆုံး ရှိတာ တွေ့ရတယ် ဆိုပြီး၊ TNLA ဘက်က ပြောပေမယ့်၊ သီးခြား အတည်ပြုမှု မရယူ နိုင်သေးပါဘူး။
တနိုင်ငံလုံး အပစ်ရပ်ရေး ဒုတိယမူကြမ်းကို သဘောတူနိုင်ခဲ့တယ် ဆိုပြီး၊ ရန်ကုန် ငြိမ်းချမ်းရေး စင်တာ တွေ့ဆုံပွဲကနေ၊ အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်တွေ နဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ NCCT အကြား ကြေညာခဲ့ စဉ်မှာပဲ၊ ရှမ်းပြည်နယ် အတွင်း၊ ဒီလို တိုက်ပွဲတွေ ဆက်လက်
ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၏တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ တို့၏ ပူးတွဲ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
၁။ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီမှ ဒုတိယဥက္ကဌ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ၏ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့မှ ဒုတိယအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်(၁) ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်း ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအကြား တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲနိုင်ရေးအတွက် သဘောတူစာချုပ်မူကြမ်း (Single Text Draft) ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၄ခုနှစ်မေလ(၂၁)ရက်နေ့မှ(၂၃) ရက်နေ့ထိ ရန်ကုန်မြို့ ရွှေလီလမ်း မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး ပြန်လည်ထူ ထောင်ရေးလုပ်ငန်း ဗဟိုဌာန (MPC) ၌ ၃ ရက်ကြာတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။
၂။ နှစ်ဘက်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၅)ရက်နေ့မှ (၈)ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်ခဲ့ သည့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ရရှိခဲ့သည့် ပထမမူကြမ်း (Single Text Draft)ပါ အခန်း(၇)ခန်းမှ ထပ်မံဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းရမည့် အချက်များကို ရင်းရင်းနှီးနှီးပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးနောက် နှစ်ဘက်သဘောတူညီချက်များ ရရှိကာ ဒုတိယမူကြမ်းကို အတည်ပြု နိုင်ခဲ့သဖြင့် တိုးတက်မှုများ ရရှိခဲ့ပါသည်။
၄။ နှစ်ဘက်ကိုယ်စားလှယ်များသည် တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲနိုင်ရေးအတွက် သဘောတူစာချုပ် အမြန်ဆုံးချုပ်ဆိုနိုင်ရန်နှင့် နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဦးတည် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် နည်းလမ်းရှာဖွေရန် ရည်ရွယ်သည့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်သို့ တက်ရောက်သည့် ပြိုင်ဘက်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်ပြီးနောက် ပရာယွတ်က အာဏာသိမ်းကြောင်း ကြေညာပြီး အမျိုးသားငြိမ်းချမ်းရေး ထိန်းသိမ်းမှု ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။
ပရာယွတ်က နိုင်ငံ၏ အာဏာကို ငြိမ်းချမ်းမှု ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီက ချုပ်ကိုင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းကော်မတီကို သူက ဦးဆောင်သွားမည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ပရာယွတ် (၆ဝ နှစ်) က သူ၏ ပြင်းထန်စွာ ပြောကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းအတွင်း ဘန်ကောက်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံဒေသများစွာတို့တွင် အကြမ်းဖက်မှုများ ဖြစ်ပွားသောကြောင့် အပြစ်မဲ့သူတို့၏ အသက်များနှင့်အိမ်ရာများ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး အကြမ်းဖက်မှုများ ပိုမိုမြင့်တက်လာဖွယ်ရှိသောကြောင့် အာဏာ သိမ်းရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခု စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းယူမှုသည် ၁၉၃၂ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း ၁၂ ကြိမ်မြောက် အာဏာသိမ်းယူမှု ဖြစ်သည်။ ယင်းအာဏာသိမ်းယူမှုများအနက် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆာနက်ချာလော်ယု၏ ၁၉၇၆ ခုနှစ်နောက် အာဏာသိမ်းယူခဲ့မှုသည် ထိုင်းနိုင်ငံ သမိုင်းတွင် ထင်ရှားခဲ့သည်။ ယင်းကဲ့သို့ အာဏာသိမ်းယူမှု မပြုမီ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ သမ်မာဆက် တက္ကသိုလ်ဝင်းအတွင်း ဆန္ဒပြနေကြသည့် ကျောင်းသားများကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ ၄၆ ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။
ထိုင်းစစ်တပ်က အာဏာသိမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂျွန်ကယ်ရီက တရားမျှတမှုမရှိဟု ပြင်းထန်စွာ ပြစ်တင် ဝေဖန်ရှုတ်ချလိုက်ပြီး မဟာမိတ်ထိုင်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပြုလုပ်ရန် ပြန်လည် စဉ်းစားရမည်ဟု သတိပေးလိုက်သည်။ ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ကလည်း ထိုင်းနှင့် စစ်ရေးအရ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ပြန်လည်သုံးသပ်ရမည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ၀ီလျံဟိတ်က ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီဘက်သို့ ပြန်လည် ဦးလှည့်ရန် တောင်းဆိုလိုက်ပြီး စစ်အာဏာသိမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အလွန်တရာ စိုးရိမ်မိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြင်သစ်သမ္မတ ဖရန်ဆွာအော်လွန်းဒ်ကလည်း ထိုင်းစစ်အာဏာသိမ်းမှုအား ပြင်းထန်စွာ ပြစ်တင်ဝေဖန်ရှုတ်ချ ခဲ့ပြီး ဥပဒေ စည်းမျဉ်းများကို အမြန်ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်က ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အာဏာသိမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အပြင်းအထန် စိုးရိမ်မိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံအနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီနည်းကျ အရပ်သား
မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာမှာ မေလ ၂၁ရက်နေ့က ကျင်းပတဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် ပူးတွဲပြုစုမယ့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဆွေးနွေးပွဲကို ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းအပါအဝင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး
စာချုပ် အသစ်တွေ ထိုးစရာ မလိုပါ။ ထိုးခဲ့ပြီးသား စာချုပ်တွေကို ကတိအတိုင်း ရုိုးသားစွာ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့သာ လိုပါတယ်။
ကေအိုင်အိုနှင့် မြန်မာအစိုးရ ၁၉၉၄ နှစ်ဖက်အပစ်ရပ်သဘောတူစာချုပ် - စာမျက်နှာ ၄
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ မေလ ၂၀ ရက်နေ့က စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ကြေညာခဲ့ပေမယ့် အာဏာသိမ်းတာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောခဲ့ပြီး အခုနောက်ဆုံး ဒီကနေ့မှာတော့ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ ထိုင်း ပီဘီအက်စ် သတင်း ဋ္ဌာနက ကြေညာလိုက်ပါပြီ။
င်ငံတွင်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ရစေရေးအတွက် အခုလို စစ်တပ်က အာဏာ အရပ်ရပ်ကို တာဝန်ယူလိုက် တာဖြစ် တယ်လို့ ကြေညာပါတယ်။ မနေ့ကတော့ ထိုင်း နိုင်ငံမှာ တင်းမာမှုဖြစ်နေတဲ့ အုပ်စုတွေကို ထိုင်း စစ်ခေါင်းဆောင်တွေက ခေါ်ယူကာ မျက်နှာချင်း ဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး စေခဲ့ပါ သေးတယ်။
ဒီကနေ့မှာတော့ ယခင် ၀န်ကြီးချုပ်တွေဖြစ်တဲ့ မစ္စတာ သက်ဆင်နဲ့ မစ္စယင်လတ်အစိုးရတွေ ကို ထောက်ခံ တဲ့ ရှပ်နီ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ အဲဒီအစိုးရတွေကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ဆုထေ့ပ် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး အဖွဲ့တွေက
TNLAတပ်မတော် နှင့်မြန်မာတပ်မတော် တပ်မ-၇၇ တုိ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား မြန်မာတပ် ၂ -ဦးကျဆုံး
၂၂ ရက် မေ ၂၀၁၄
ယနေ့ နေ့လည်ပိုင်း ၁၂း၀၀မှ ၁၂း၃၀ အတွင်း မိုင်းငေါ့မြို့နယ်ခွဲ ကျောက်ဖြူနှင့်ပန်လောရွာအကြားတွင် TNLA တပ်မတော် တပ်ရင်း(၇၁၇)နှင့် မြန်မာ့တပ်မတော် တပ်မ (၇၇)တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားကြောင်း ရှေ့တန်းတပ်မှူး၏သတင်း ပေးပို့ချက်အရသိရသည်။
တိုက်ပွဲတွင် မြန်မာ့တပ်မတော် တပ်မ-(၇၇) မှ ၂ ဦးကျဆုံးပြီး TNLA ဘက်တွင် ထိခိုက်မှုမရှိပါ။
မြန်မာ့တပ်မတော်သည် တအာင်းဒေသအတွင်းသို့ တပ်မ (၇၇)၊တပ်မ (၈၈)၊တပ်မ (၅၅)၊တပ်မ (၁၁) တို့အပါအ၀င် စကခ (၁)၊ စကခ(၁၆)တို့ပါဝင်ပြီး စစ်အင်အားတပ်ရင်းပေါင်း (၆၀)ကျော်တို့သည် ဒေသ အတွင်း တအန်းတပ်မတော်ကို အပြတ်ချေမှုန်းရည်စီမံချက်ဖြင့် ထိုးစစ်ဆင်နေသည့်အတွက် နေ့စဉ် နေ့တိုင်း တအန်းဒေသအတွင်း တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေရသည်။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအစိုးရလို့ ခေါ်ဝေါ်နေကြတဲ့ မြန်မာအစိုးရ ဒုသမ္မတကြီးအနေနဲ့ အခုလို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကာလမှ အခြေခံ လူတန်းစားတွေ ဘယ်လို ရပ်တည်နေထိုင်ကြသလဲ ဆိုတဲ့ ဧရာဝတီက ၂၀၁၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာ ရိုက်ကူး တင်ဆက်ထားတဲ့ မှတ်တမ်း ဗီဒီယိုတခုကို ပြန်လည် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အင်းလျားလမ်းနှင့် တကသိုလ်ရိပ်သာ လမ်းထောင့်တွင် ယနေ.နေ.လည်(၂)နာရီခန်.က ကားတွေ ရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်ပြီး Taxi ကားတစ်စီးမှာ တစ်စီးပြီးတစ်စီး တိုက်လာတာကို တွေ့ရ ကြောင်း၊လူတွေကလည်း အော်ဟစ်နေကြပြီး ယာဉ်ထိမ်းရဲ နှစ်ယောက် ချက်ချင်း ရောက်ရှိလာကြောင်း၊ယာဉ်ထိန်း တစ်ယောက် ကသော့ကို ဆွဲဖြုတ်ဖို့ ကြိုးစားပါတယ်၊ ကားပေါ်မှာလူမှ ထိုးကြိတ် တိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့် ယာဥိထိန်းရဲတစ်ဦး မျက်လုံးတော်တော် ထိခိုက်သွားပုံရကြောင်း။ အဆိုပါလူကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေနဲ့ ယာဉ်ထိန်းရဲ နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး ကြိုးစားတာကို ပြန်ခုခံပါတယ်..နောက် ၁၀ မိနစ်လောက်အကြာ ယာဉ်ထိန်း၅ယောက်လောက် ထပ်ရောက် လာပြီးသူ့ကို Probox ကားပေါ်ပွေ့တင်သွားပါတယ်။ ကားစထွက်ရုံပဲ ရှိသေးတယ် Probox နောက်ဖုံးထဲမှာ ထည့်ထား တာကို ဖွင့်ပြီး လမ်းပေါ် ထွက်ပြေးပြန်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်မှ လူအားလုံးကဝိုင်းချုပ်..ခါးပတ်နဲ့လက်ကိုချည်ပြီး ဖမ်းဆီး တင်ခေါ်သွားရပါတယ်။ ထိုသူမှာ Taxiသမားဆီက ကားကို လုယက်ပြီး ထွက်ပြေးလာတာ ဖြစ်ကြောင်း နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးထားတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်လို. ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ဖမ်းဆီးပေးခဲ့သူ ကိုစိုးဂျူလှိုင်၏ ဖေ့စ်ဘုတ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ဒီဆွေးနွေးပွဲကနေ နှစ်ဖက် ဆွေးနွေးရမယ့်အချက် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းပြီးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ကြောင်း
ထိုင်းတွင် စစ်အုပ်ချုပ်ရေး အမိန့် ထုတ်ပြန်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ထိုင်းစစ်တပ်က ယနေ့နံနက်ပိုင်း၌ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး (Martial Law) ထုတ်ပြန်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး ထိန်းသိမ်းရေး ထိန်းချုပ်မှု စင်တာ (The Peace Keeping Command Centre-PKCC) ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်း သိရသည်။ ထိုင်း လုံခြုံရေး အက်ဥပဒေအရ ထိုင်း တပ်မတော် စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ပရာယွတ် ချန်အိုချာ လက်မှတ်ရေးထိုး၍ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ကြေညာခြင်းဖြစ်သော်လည်း စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းခြင်း မဟုတ်ကြောင်း ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
Post by Khin Min Zaw.
video by - DVB
ယခုကဲ့သို့ ထိုင်းစစ်တပ်က စစ် အုပ်ချုပ်ရေး ကြေညာခြင်းသည် လက်ရှိ အိမ်စောင့်အစိုးနှင့် တိုင်ပင်ခြင်း မရှိကြောင်းလည်း အစိုးရပိုင်းက ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ၀န်ကြီးချုပ် ယင်းလတ်ကို ဖွဲ့စည်းပုံအ ခြေခံဥပဒေခုံရုံးမှ အဂတိလိုက်စားမှု စွဲချက်ဖြင့် ယခုလ စောစောပိုင်းက ရာထူးမှ ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံရေးတွင် စစ်တပ်က မကြာမကြာ အာဏာသိမ်းလေ့ရှိပြီး ၈၁ နှစ် အတွင်း စစ်တပ်က အကြိမ်ပေါင်း ၁၈ ကြိမ် အာဏာသိမ်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Copy from - The Irrawaddy
ပလောင်လူမျိုး မိဘမဲ့ကလေး ကိုးဆယ်ကျော် ပန်းချီပြပွဲ ပြုလုပ်မည်
ပလောင်လူမျိုး မိဘမဲ့ကလေးငယ် အယောက် ၉ဝ ကျော်ကို ပါဝင်ရေးဆွဲထားသည့် Free Of Charge Art Exhibition 2014 ပန်းချီပြပွဲကို New Zero Art Galleryတွင် ပြသကြ မည်ဖြစ်သည်။
ယင်းပန်းချီပြပွဲတွင် ပြသကြမည့် မိဘမဲ့ကလေး များကို တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရတနာပုံရိပ်ငြိမ် ၊ ဘုန်းတော်ကြီး စာသင်တိုက်တွင် New Zero Art Gallery က သုံးလကြာ ပန်းချီပညာကို သင်ကြား ပေးပြီး ၎င်းတို့၏ ပန်းချီကားများကို ဇွန်၁၄ရက်မှ စတင်ကာ တစ်ပတ်ကြာ ပြသမည်ဟု New Zero Art Gallery က ပွဲစီစဉ်ပေးသူ မဟေမာန် ကမဇ္စျိမသို့ပြောသည်။
“ကလေးတွေ အတွက်လည်း ကုသိုလ်ရအောင်ရယ် ၊နောက်ပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ပြန်လည် အကျိုးပြုတာလည်းဖြစ်အောင်လို့ ပါ”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ယင်း ပန်းချီပြပွဲတွင် ပြသကြသည့် တိုင်းရင်းသား ကလေးသူငယ်များ၏ ပန်းချီလက်ရာ များသည် ပြည်ပ နိုင်ငံများမှ လာရောက်ကြည့်ရှုသည့် အခါကြိုက်နှစ်သက်ပါက ပြည်ပနိုင်ငံ များ၏ဈေးကွက် သို့
ကမ္ဘာ့မီဒီယာပေါ်က ရုပ်ရှင်မင်းသား တဖြစ်လဲ နာရေးကူညီသူ ဦးကျော်သူ
ကမ္ဘာ့မီဒီယာမှာ ဖော်ပြပါရှိလာတဲ့ နာရေး ကူညီမှု အသင်း ( ရန်ကုန်) ရဲ့ ဦးဆောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ သရုပ် ဆောင် ဦးကျော်သူ အကြောင်းပါ။
၁၉၈ဝ ခုနှစ်နဲ့ ၉ဝ ခုနှစ်လွန်ကာလတွေက မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကမှာ ထင်ရှားတဲ့ မင်းသားတဦးဖြစ်ပြီး ရုပ်ရှင်ကား ပေါင်း ၂ဝဝ ကျော်ကို ရိုက်ကူးခဲ့သူ ဦးကျော်သူဟာ မြန်မာလူထုကြား အလွန် လူကြိုက်များ တာကြောင့် အရင် စစ် အစိုးရ လက်ထက်က သူ့ကို ဝါဒဖြန့်ချိရေး ရုပ်ရှင်တွေမှာ ထည့်သွင်း အသုံးပြုခဲ့ ပါသေးတယ်တဲ့။
ဒါပေမယ့် ဦးကျော်သူဟာ သူ့ရဲ့ ရုပ်ရှင်နဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုကို အဆုံးသတ်လိုက်ပြီး ဘဝကို ပြောင်း လဲ ပစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကတော့ စွယ်စုံအနုပညာရှင် ဆရာကြီး ဦးသုခ အစပြုကာ နာရေးကူညီမှုအသင်းကို တည် ထောင်သူတွေ နဲ့ အတူ ပူးပေါင်း ပါဝင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုထိလည်း နာရေး ကူညီမှု အသင်း (ရန်ကုန်) ဟာ ရန်ကုန်နဲ့ မြို့တော်တော်များများမှာ နာရေး ကူညီမှု ဝန် ဆောင်မှုတွေကို လုပ်ဆောင်နေသလို ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး ကဏ္ဍ တတ်စွမ်းသမျှ ကူညီဝန်ဆောင်မှု
တွေ လည်း ပေးနေသူပါ။
PBS News Hour ရဲ့ ဦးကျော်သူအကြောင်း တင်ပြချက်ကို ပြန်လည် ခံစားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
၀ါလိုင်းပြည်သူ့စစ်ထံ မူးယစ်ဆေးဝါး ဖမ်းဆီးချိန်တွင် TNLA နှင့် မြန်မာစစ်တပ် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွါး
၁၉ ရက် မေလ ၂၀၁၄ ခုနှစ်
နမ့်ခမ်းမြို့နယ်၊ ပန်ဆေးဒေသ၊ ၀ါလိုင်းကျေးရွာတွင် ၁၉ရက် မေလ ၀၂း၀၀ နာရီချိန်တွင် ၀ါလိုင်းကျေးရွာ၊ ၀ါလိုက်ပြည်သူ့စစ် နေအိမ်အား သတင်း အရ တအာင်း တပ်မတော်မှ မူးယစ်ဆေးဝါး ၀င်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ အဆိုပါနေအိမ်တွင် ဘိမ်းစိမ်း (၂၀)ပိဿာ ရာမဆေးပြား (၁၀)ထုတ် (၂၀၀၀)ပြားနှင့် သေနတ် M-22(၄) လက်၊ M-20 ပစ္စတို(၂)လက် ၀င်ရောက်ဖမ်းဆီး ရမိသည်။
ထိုသို့ဝင်ရောက်ဖမ်းစီးချိန်တွင် ၀ါလိုင်းပြည်သူ့စစ်စခန်းမှ အခြေချတပ်စွဲနေသော မြန်မာစစ်တပ် တပ်မ(၈၈) မှ တအာင်းတပ်မတော်(TNLA) အား စခန်းမှနေ၍ စီးနင်းပစ်ခတ်သဖြင့် တအာင်းတပ်မတော်ဘက်မှလည်း စခန်းပေါ်သို့ RPG (၃)ချက် ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့သဖြင့် နှစ်ဖက် နာရီဝက်ခန့် အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
တိုက်ပွဲတွင် တအာင်းတပ်မတော်မှ ထိခိုက်ကျဆုံးမရှိပါ။ မြန်မာ့တပ်မတော်ဘက်မှ (၁)ဦးကျဆုံးသည်။
Posted by PNSjapan at 10:24 AM0comments
မန္တလေးတိုင်း ပုသိမ်ကြီးမြီု့နယ် နှမ်းကြဲကျေးရွာအုပ်စုမှ ဘုန်တော်ကြီးကျောင်းအား မြီု့နယ်သံဃနာယကအဖွဲ့နှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့တို့မှအဓမ္မ ဖျက်ဆီးခံ
ဘယ်သူမှတော့ပျော်လို့ ရောက်လာကြမှာမဟုတ်ဘူး နေဝင်ရီတယောမှာ ရွာကလူတွေဝိုင်းကူသယ်ခွင့်မရပဲ ကိုရင်လေးတွေ သီလရှင်လေးတွေကိုယ်တိုင် လယ်ကွင်း ခေါင်ခေါင်ကို ပစ္စည်းတနိုင်တပိုင်သယ်ယူရွှေ့ပြောင်းပြီး လာနေရရှာတယ် တဲ့ (လာကူပေးတဲ့ ရွာနီးနားက အဒေါ်တစ်ယောက်ပြောပြချက်) ဒါကြောင့် ဘာကြောင့် ဖြစ်ရတာလဲဆိုတာ ခဏမေ့ထားပြီး ကြည့်လိုက်ပါအုံး ဒီလိုဝေးလံလွန်းပြီး ပုသိမ်ကြီးမြို့အစွန် တောင်ခြေနားက ဒုက္ခသုက္ခ ရောက်တဲ့နေရာမှာ ကိုရင်ပိစိလေးတွေ သီလရှင်လေးတွေ စေတနာအပြည့်နဲ့ စာသင်ပေးနေတဲ့ ဆရာမငယ်လေးတွေ ကွင်းပြင်ကြီးမှာ ယာယီတဲလေးတွေ ထိုးပြီးဖြစ်သလို နေနေရတယ်
စားစရာ ရေ နေစရာ ကျောင်း ပြီးလက်ရှိ အဓိကလိုအပ်နေတာ အရေးပေါ် အိမ်သာပါ မသုံးတော့တဲ့ သင်္ကန်းအပါးစလေးကို ဖြစ်သလိုပတ်ပြီး မလုံမခြုံတက်နေရတဲ့ စိတ်မသက်သာစရာ မြင်ကွင်း တမိုင်ကျော်လောက် ရှိတဲ့တာဘောင်မှာရေသွားချိုးနေရတယ
အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက်က ကလေးတစ်လေး တစ်ယောက်ဆို ရှမ်းပြည်တော်တော်ဝေးပြီး သူ့တို့ဘက်မှာ သူပုန်များလို့ဆိုပြီး ကလေးအသက်စိုးရိမ်လို့ ၃နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်လေးကို မိဘကိုယ်တိုင် ကျောင်းကိုခဏလာအပ်သွားတာ အခုလိုမြင်ကွင်းမျိုးသာမြင်ရင် ဘယ်လောက်ရင် ကျိုးလိုက်မလဲကွယ် တဲ့့
ဒီနေ့တော့ ဝန်ထမ်းတွေနဲ့စုပေါင်းထားတဲ့ ပရဟိတရံပုံငွေနဲ့ ဆီဝယ် ခေါက်ဆွဲခြောက်အလှူခံ ကလေးတစ်ယာက်က ဆန်တစ်အိပ်လှူတာကို ကိုဝမ်းနဲ့သွားလှူ အိမ်သာဆောက်ဖို့ အတွက် ကိုဝမ်းဆီ ၅သောင်းလှူခဲ့ပြီ နောက်ပိုင်းတော့ တတ်နိုင်သလောက် ဝိုင်းကူဖို့ရှိမယ် အခက်ခဲဖြစ်နေသူတွေ အတွက် စာနာမယ့်လက်တစုံဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့့
Ko Lwin 0943102224
ဖြေ။ ။ တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးချုပ်ဆိုတဲ့ အခါ အရေးကြီးတဲ့ အပိုင်း (၂)ပိုင်းပါပါတယ်။ ကြားကာလအစီအစဉ်လို့ ကျနော်တို့ကပြောနေတယ်။ ကျနော်တို့ NCCT (Nationwide Ceasefire Coordination Team) က ပြောတဲ့ ကြားကာလအစီအစဉ်ဆိုတာ တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးတဲ့ အချိန်ကစပြီးတော့ နိုင်ငံရေးအဖြေတစ်ခုထွက်လာတဲ့အထိ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲညီလာခံကြီး ပင်လုံကဲ့သို့သော အစည်းအဝေးကြီးတစ်လုပ်ပြီး အဖြေတစ်ခုထွက်လာမယ်။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး စာချုပ်ချုပ်ပြီးတဲ့ အချိန်ကနေ အဖြေတစ်ခု ရရှိလာတဲ့အချိန်ထိကို ကြားကာလလို့
ကရင်လူမျိုးခလေးမနှစ်ဦးကို စည်ပင်ကလူတွေ မရောင်းဖို့ အော်ငေါက်တဲ့အပြင် ဈေးဗန်းပါ
ဆင်းရဲလိုချင်း အချင်းချင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ။
Kyaw Swar Myint(FB)စာမျက်နှာမှ
ရခိုင်မှာ အသက်ပေး သွားတဲ့ ရဲတွေ အတွက် သက်ဆိုင်သူ တစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်
မင်းတို့ သေတဲ့ သတင်း ၊ ဓါတ်ပုံတွေ ငါတွေ့ရတော့ ငါ့ရင်ကို ကောက်စွ တံဇဉ်နဲ့ ထိုးဆွ နေသလို ပါဘဲ။ ငါ့လူ တွေကလဲ စစ်ရေး အတွေ့ အကြုံမရှိ။ လုံလောက်တဲ့ သင်တန်းလဲ မပေးထား။ ခေတ်မီတဲ့ လက်နက်ကလဲ တပ်ဆင်မပေး။ သေနှင့် အုန်းပေါ့ ရောင်းရင်းရာ။
ငါလဲ မင်းတို့ အနောက်ကို ဘယ်အချိန် လိုက်လာရမလဲဆိုတာ မသိသေး ပါဘူး။ တစ်ချိန်ချိန်ပေါ့။ ငါလိုက်လာရင် မင်းတို့ အစား ငါ ၈ ယောက်တွဲခေါ်လာခဲ့မယ်သိလား။ မင်းတို့က ပွန်းလေးတွေကွ။ ငါးစာ ဆိုတာတောင် ရိုးရိုးငါးစာမဟုတ်ဘူးကွ။ ငါးမျှားချိန်မှာ ဖေါက်သီခံထားရတဲ့ တီကောင် ငါးစာလေးတွေ။
ကဲ ထားပါတော့ကွာ။ မင်းတို့ ဆုတောင်းရမှာ တစ်ခုက နောက်ဘ၀ ဆက်တိုင်းဆက်တိုင်း လူဖြစ်တိုင်း မြန်မာပြည်က ရဲ မဖြစ်ရပါလိုကြောင်း ဆုတောင်းကွာ။
အာဖဂန်က ရဲတောင် မင်းတို့ထက်သာတယ်ကွ။ မင်းတို့ ပစ်လိုက်လို့ ကံမကောင်းရင် မင်းတို့ ကျည်ဖိုးတွေ ပြန်လျော်နေရအုန်းမယ်။ လေးခွသာ ဆောင်ထားဟကောင်တွေ။ လေးခွက လောက်စာလုံးဖိုး လျော်စရာမလိုဘူးကွ။ လေးခွလဲ ထိချက် ကောင်းရင် သေပါတယ်ကွာ။
စိတ်မပျက်ပါနဲ့။ မင်းကိုင်ထားတဲ့ ရိုင်ဖယ်တို့ အမ် ၁၆ တို့ဆိုတာ ပစ်လို့ ကျည်ထွက်ချင်မှ ထွက်မှာကွ။ ထွက်လဲ ထိချင်မှ ထိမှာကွ။ စတင်းဆိုပါဆိုးသေး။ ကျည် ၁၅ တောင့်လောက်ပစ်ပီးရင် ၂ ကိုက်လောက်
Posted by PNSjapan at 6:37 PM0comments
UNICEF ရုံးဖွင့်ထားသော ရန်ကုန်မြို့ ဗဟန်းမြို့နယ် ရွှေတောင်ကြား ၂ ရပ်ကွက် အင်းလျားမြိုင်လမ်း ခြံအမှတ် ၂၃/အေ (ဓာတ်ပုံ – ဟိန်းထက် / ဧရာဝတီ)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်က စပြီး နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ တံခါး ဖွင့်လာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ကုလ သမဂ္ဂ အပါ အ၀င် နိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း (INGOs) တွေ၊ ကုမ္ပဏီတွေလည်း ၀င်ရောက် ရုံးစိုက် လာနေကြ သလို ရန်ကုန်မြို့နဲ့ မြို့ကြီးတချို့က အိမ်၊ ခြံမြေ ဈေးနှုန်းတွေကလည်း အဆမတန် မြင့်တက်သွားပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့က အိမ်၊ ခြံမြေတွေမှာ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ရုံးခန်း ငှားရမ်းစရိတ်ဟာလည်း အလွန်အမင်း မြင့်တက်နေ တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရုံးခန်း၊ အိမ်၊ ခြံမြေငှားရမ်းခ ဈေးနှုန်းတွေဟာ ဒေသတွင်း နိုင်ငံတွေထဲ က အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီး အချမ်းသာဆုံး စင်ကာပူနိုင်ငံထက် မြင့်မားသလို ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက် နဲ့ ဟောင်ကောင်တို့ထက် အဆမတန် ပိုမြင့်မားကြောင်းလည်း မကြာသေးခင်က ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းတခု မှာ ဖော်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက ရုံးခန်းငှားရမ်းခ ဈေးနှုန်းက ပထမတန်းစား နေရာနဲ့ ကွန်ဒို အိမ်ရာတွေမှာဆို ၁ စတုရန်း မီတာကို ၇၈ ဒေါ်လာ နှုန်း ရှိတယ်လို့လည်း အဲဒီသတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့ကလည်း ဗြိတိန်ပါလီမန်ရဲ့ မြန်မာ့အရေး ကြားနာမှု တခုမှာ အမတ်တချို့က ဗြိတိန် အစိုးရကို မြန်မာနိုင်ငံက ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့(UNICEF) ရုံးခန်းငှားခ ဘယ်လောက်ပေးရသလဲ ဆိုတာ မေးခွန်း ထုတ်ခဲ့သလို ရုံးခန်း ငှားရမ်းထားတဲ့ နေအိမ်ဟာ အရင် စစ်ဗိုလ်ချုပ် တဦးဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ညွှန့်တင်ရဲ့ အိမ်ဖြစ်တယ် ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း
Posted by PNSjapan at 6:34 PM0comments
ကိုမင်းကိုနိုင် ရဲ့ ပုဒ်မ ၄၃၆ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေး မိန့်ခွန်းမှ ကောက်နှုတ်ချက် (မေလ ၁၈ ရက် မန္တလေး အောင်ပင်လယ်ကွင်း မိန့်ခွန်း)
Post by RFA Burmese.
Posted by PNSjapan at 6:32 PM0comments
" ကိုဇော်ရေBKK သတင်းတွေအတွက်ကျေးဇူးပါ ညီမတို့ လည်းဆေးခန်းကိစ္စနဲ့ ဒီမှာရောက်နေတော့ စိတ်ပူလို့ပါ။ ဒီနေ့ ဆေးခန်းကို အလာ Isetan ကုန်တိုက်ရှေ့ ကတံတားကနေ Big C ကိုကူးလာတုန်း အစိုးရ အတိုက်ခံပါတီ ရှပ်အင်္ကျီဝတ်ထားတဲ့ လူတစုက ခုနှစ်ရောက်လောက်ရှိမယ် မိန်းမတစ်ယောက် လည်းပါတယ် ညီမတို့ ကိုတားပြီး passport အတင်း ထုတ်ခိုင်းတယ်။ နေက်ပိုက်ဆံအိတ်ပါ ထုတ်ခိုင်း တယ် နောက်အလှူငွေပုံစံမျိုး ပိုက်ဆံကို တစ်ယောက် ဘတ်တစ်ထောင်စီအတင်းပေးခိုင်းတယ် ညီမတို့ ကို
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး လူထုဟောပြောပွဲ (မန္တလေး)
Posted by PNSjapan at 12:02 PM0comments
အသက်မပြည့်သေးသူ ကချင်အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးအား အစိုးရစစ်သားများ အဓမ္မပြုကျင့်
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကွတ်ခိုင်မြို့ နယ် နမ့်ဂွတ်ကျေးရွာ တွင်နေထိုင်သော အသက် (၁၄)နှစ် အရွယ် အသက်မပြည့်သေးသူ ကချင် အမျိုးသမီး ငယ် တစ်ဦး အား မေလ(၁ရ )ရက် ညနေ (၅)နာရီ အချိန်ခန့် တွင် တပ်မ(၈၈)လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း မှ တပ်ဖွဲ့ ဝင်များ အဆိုပါ နမ့်ဂွတ်ကျေးရွာ တွင်း ၀င်ရောက်လာကာ အဆိုပါ အမျိုးသမီးငယ်လေးအား ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားပြီး အဓမ္မပြုကျင့် ခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများမှ သတင်းပေးပို့ သည်။ အသက်မပြည့်သေးသော ငယ်ရွယ်သည့် ကျောင်းသူ အရွယ် သမီးအား ယခုကဲ့သို့ ဗမာစစ်သားများမှ မတရား အဓမ္မ မုဒိန်းကျင့်သွားသောကြောင့် မိဘများမှာ အလွန်အမင်း ၀မ်းနည်းပူဆွေးလျက်ရှိနေသည်။ သက်ဆိုင်ရာသို့အရေးယူပေးပါရန် ကွတ်ခိုင်မြို့ နယ် ရဲစခန်းသို့တိုင်ကြားထားကြောင်း သိရသည်။
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကျေးရွာများတွင် ဗမာအစိုးရတပ်များ မှ ကျေးရွာများအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ကာ ရွာသူများအား ခြိမ်းခြောက်ရိုက်နှက်ခြင်း ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးခြင်း အဓမ္မပြုကျင့်ခြင်း ရွာသူရွာသားများပိုင် ပစ္စည်းများ ငွေကြေးများအား လုယူသိမ်းဆည်း ယူဆောင်သွားခြင်းများ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ပြုလုပ်လျက်ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
လာအိုလေယာဉ်ပျက်ကျမှု ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးအပါအဝင် ၂၂ ဦး သေဆုံး
လာအို ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး၊ ဓာတ်ပုံ- ဘန်ကောက်ပို့စ်
အခမ်းအနား တခု တက်ရောက်ဖို့ လာအို ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး ပါဝင်တဲ့ လာအို လေတပ်လေယာဉ်တစီး ဒီကနေ့ စနေနေ့ မနက်ပိုင်းက ပျက်ကျသွားခဲ့လို့ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးအပါအဝင် အနည်းဆုံး လူ ၂၂ ဦး
သေဆုံးသွားသူတွေထဲမှာ လာအို ပြည့်သူ့ တော်လှန်ရေးပါတီ ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်တွေလည်း ပါဝင်ပြီး ဒီမနက် လေယာဉ် ပျက်ကျမှုမှာ ၃ ဦးသာ အသက်ရှင်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေလည်း ထွက်ပေါ်ပါတယ်။
လာအိုနိုင်ငံ ဒု ဝန်ကြီးချုပ်လည်း ဖြစ်၊ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးလည်းဖြစ် လာအို ပါတီ ပေါလစ်ဗျူရို အဖွဲ့ဝင် လည်ြး ဖစ်သူ Douangchay Phichit ဟာ ပြည်သူ့ လုံခြုံရေး ဝန်ကြီး၊ ဗီယန်ကျန်း မြို့တော်ဝန် စတဲ့ သူတွေ နဲ့ အတူ နိုင်ငံရဲ့ အရှေ့မြောက် ပိုင်း ခရိုင်တခုနားမှာ ဒီမနက် ၆ နာရီ ကျော်လောက်က ပျက်ကျ သွား လို့ သေဆုံးသွားကြတဲ့ အကြောင်း ဘန်ကောက် ပို့စ် မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
တာဝန် ရှိသူတွေကတော့ လေယာဉ်ပျက်ကျမှုမှာ အသက်ရှင်သူတွေကို ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေ လုပ်နေပြီး ဖြစ်ပွားမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စမ်းစစ်ဆေးဆဲ လို့ ပြောပါတယ်။
ခမရ(၄၁၅) တပ်ဖွဲ့ ဝင်များ မှ ရွာသူ(၃)ဦးအား အဓမ္မပြုကျင့်
ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ(၄)နယ်မြေ ကောင်ဆမ်ကျေးရွာသို့တပ်မ(၈၈) လက်အောက်ခံ ခမရ(၄၁၅)တပ်ရင်း မေလ(၁၅)ရက် မနက်အစောပိုင်းက ၀င်ရောက်လာပြီး တစ်ရွာလုံးအား ၀င်ရောက် မွှေနှောက်ရှာဖွေ ကာ အဖိုးတန် ပစ္စည်းများ ၊ ငွေကြေးများ လုယူ သွားပြီးနောက် ရွာသူ (၃)ဦး အား အတင်းအကြပ် အဓမ္မပြုကျင့် သွားကြကြောင်း ထပ်မံသိရှိရသည်။
၄င်း အဓမ္မ မုဒိန်းပြုကျင့် ခံရသူ ရွာသူ သုံးဦးတွင် အသက် (၁၆)နှစ်အရွယ် ရှမ်းအမျိုးသမီး ငယ် တစ်ဦး နှင့် အိမ်ထောင်သည် ကချင် အမျိုးသမီး(၂)ဦး ပါဝင်သည်ဟု သိရသည်။
တစ်မြန်နေ့ က လည်း ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နမ်ဂွတ်ကျေးရွာ မှ ကချင်အမျိုးသမီး (၆)ဦး အား အစိုးရတပ် ခမရ(၃၂ရ) မှ အတင်းအကြပ် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြပြီး ၄င်းတို့ ၏ အထုပ်အပိုး ရိက္ခာ များ ထမ်းပေးခဲ့ရသည့် အပြင် မိုင်းရှင်းသည့် သဘောဖြင့် စစ်ကြောင်း၏ ရှေ့ ဆုံးမှ သွားခိုင်းခဲ့ကြောင်း ကေအိုင်အေ တပ်ဖွဲ့ ဝင်များ ခြုံခိုတိုက်ခိုက် မခံရအောင် ကာဗာ အနေဖြင့်လည်း အသုံးချခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ အမျိုးသမီး(၆)ဦးအား ယခုအခါ ပြန်လွတ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ထပ်မံသိရသည်။
သူတို့အတွက်တော့ ...ဂွင်တွေ ဒေါ်လာတွေ ... သားစဉ်မြေးဆက် သုံးမကုန် ဖြန်းမကုန် .... ချမ်းသာပြီးရင်း ချမ်းသာနေပါပကောလါး ဟရိုးးးးးးးးး
အမြန်လမ်းဖောက်လို့ ကုန်သွားတယ်ဆိုတဲ့ ဒေါ်လာတစ်ဘီလီယံ ဆိုတာ ဘယ်လောက်တောင် များသလဲ
သူငယ်ချင်းက တကယ်သိချင်တာလား သိချင်တာပေါ့ကွ ဒါဆို ပေးတံတချောင်းရယ် ငါးထောင်တန် ဆယ်အုပ်ရယ် ယူခဲ့ ငါးထောင်တန်တစ်အုပ်ဆိုတော့ သိန်းငါးဆယ်ကိုေ ပြာတာလား
ကဲပေတံကို အောက်ကိုချ အဲဒီပေတံ ရဲ့ဘေးမှာ ငါးထောင်တန် တစ်အုပ်ကိုထား ပြီးရင် ပေတံကို နောက်တစ်ပေတိုး အဲဒီမှာ နောက်ထပ် ငါးထောင်တန် တစ်အုပ်ကိုထပ်ထား အဲဒီအတိုင်း တစ်ပေကို ငါးထောင်တန် တစ်အုပ်စီလိုက်ထား ဆယ်ပေ ဆိုရင် ငါးထောင်တန်
ဟင် အဲဒီ ၁၀ပေ နဲ့ ငါးထောင်တန် ၁၀ အုပ်နဲ့ ဘာဆိုင်လို့တုန်း
အေး အမြန်လမ်းအစ ရန်ကုန် အမှတ် ၃ လမ်းဆုံ ကနေပြီး မန္တလေးအဝင် တံခွန်တိုင် အဝိုင်းအထိကို အဲဒီပေတံနဲ့ တစ်ပေကို ငါးထောင်တန် တစ်အုပ်စီလိုက်ချသွား အဲဒီပိုက်ဆံပုံ အတန်းကြီးဟာ အမြန်လမ်းဖောက်လို့ ကုန်တဲ့ပိုက်ဆံတွေပဲကွ ၊
ဟေ ဟုတ်လို့လားကွ ဒီလောက်များတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ
ဒီမှာ တွက်ပြမယ် အမြန်လမ်းက ၃၆၆ မိုင်ရှည်တယ် ၊ ကုန်သွားတဲ့ ပိုက်ဆံက ဒေါ်လာတစ်ဘီလီယံ ၊ ဒေါ်လာ သန်းတစ်ထောင်ပေါ့ကွာ ၊ ဒီတော့ တစ်မိုင်ကို ဘယ်လောက်တောင်ကုန်သလဲဆိုရင် = ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀/၃၆၆=၂,၇၇၇,၇၇၇.၇၈ ရတယ် ၊ တစ်မိုင်ကို ဒေါ်လာ ၂၇သိန်းကျော်ပေါ့ကွာ ၊ တစ်မိုင်မှ ၅၂၈၀ ပေရှိတယ်လေ ၊ ဒီတော့ အဲဒီဒေါ်လာတွေကို ၅၂၈၀ နဲ့ ထပ်စားလိုက်ရင် = ၂,၇၇၇,၇၇၇.၇၈/၅၂၈၀ = ၅၂၆ ဒေါ်လာရတယ်ကွာ ၊ ကဲ ကြည့် ငါတို့ အမြန်လမ်းကြီးက တစ်ပေကို ၅၂၆ ဒေါ်လာ ကုန်တဲ့လမ်းကြီးကွ
အဲဒီ ၅၂၆ ကို တစ်ထောင်နဲ့ မြှောက်ကြည့်ကွာ ၊ ငါးသိန်းနှစ်သောင်းခြောက်ထောင် ရမှာကွ ၊ ငါနမူနာပြတဲ့ ငါးထောင်တန် တစ်အုပ်ကမှ နဲနေသေးတယ်လေ ၊
ဟာ ဒီလောက်တောင် ကုန်သွားတာပါလားကွ ၊ မင်းက ငါးထောင်တန်ပြောလို့ တစ်ထောင်တန်ဆို အရွက် ငါးရာနှစ်ဆယ့်ခြောက်ရွက်ပေါ့နော် ၊ တစ်ပေ မှာ တစ်ထောင်တန် ပိုက်ဆံပုံ တစ်ပုံ နှုန်းနဲ့ မျက်စိထဲမြင်ကြည့်ရင် ရန်ကုန်ကနေ မန္တလေးအထိ အဲဒီပိုက်ဆံပုံကြိးက
အေး ဒါတောင် ငါက တစ်ဒေါ်လာကို တစ်ထောင်နဲ့ပဲတွက်ထားသေးတာ အဲဒီအမြန်လမ်းဖောက်တုန်းက တစ်ဒေါ်လာကို တစ်ထောင့်နှစ်ရာကျော် နှုန်းလောက်ရှိခဲ့တာကွ ၊ အဲဒီတုန်းက ပိုက်ဆံနဲ့ဆို ဒေါ်လာ တစ်ဘီလီယံဆိုတာ မြန်မာငွေ ကျပ်သန်းပေါင်း
အေးကွာ ဒီလမ်းကြီးထပ်ချဲ့လို့ ဒီလောက်ထပ်ကုန်မယ်ဆိုရင် ငါတို့တော့ မွဲပါပြီကွာ
Copy from - Hawdeka Khalaylay(FB)
"၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး လူထုဟောပြောပွဲ"
(၁၇၊၅၊၂၀၁၄) ဗိုလ်စိန်မှန်ကွင်း ဗဟန်းမြို့နယ်
သတင်းဓါတ်ပုံကို အင်တာနက်စာမျက်နှာကနေ ကူးယူခဲ့ပါသည်။
Posted by PNSjapan at 1:21 PM0comments
အာဏာရအစိုးရက နိုင်ငံရေးပြဿသနာ ဖြေရှင်းရာမှာတစ်ခါမှ ရိုးသားမှုမရှိ.....
ကချင်နှင့် စစ်ရှိန်လျော့ရေး ဆွေးနွေး သော်လည်း ပလောင်နှင့် တိုက်ပွဲ ရက်ဆက် ဖြစ်ပွားနေ
TNAL အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး တားဘုန်းကျော်
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း၊ သိန္နီ မြို့နယ်၊ နမ့်ဆလပ် ရွာအနီးတွင် မြန်မာ့ တပ်မတော် ခမရ (၄၅) နှင့်တအာင်း အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် TNLA နှင့် MNDAA (ကိုးကန့် တပ်မတော်) ပူးပေါင်း အဖွဲ့တို့ ယနေ့၌ နှစ်ဖက် ရင်ဆိုင် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ခဲ့ပြီး TNLA မှတစ်ဦး ဒဏ်ရာ ရခဲ့သလို အစိုးရ တပ်မှလည်း အထိအခိုက် ရှိခဲ့ကြောင်း TNLA အဖွဲ့ အထွေထွေ အတွင်း ရေးမှူးက ပြောသည်။
“ကျနော် တို့ကလည်း အဲဒီ နမ့်ဆလပ်ရွာ တောတွင်းမှာ လှုပ်ရှား နေတယ်၊ သူတို့က နမ့်ဆလပ် ဘက်ကနေ ဖြတ်တက် လာတယ်၊ လမ်းမှာ တွေ့ပြီး နှစ်ဖက် ရင်ဆိုင် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ကြတယ်။ နာရီ ၀က်လောက်တိုက်ပွဲ ဖြစ်သွားတယ်” ဟု တာဘုန်းကျော်က ပြောသည်။
ကွတ်ခိုင်နှင့် သီန္နီ လမ်းမကြီး အရှေ့ဖက်ရှိ နမ့်ဆလပ် ရွာအနီးရှိ တောင်ကုန်း ပေါ်တွင် ယနေ့ နံနက် (၉) နာရီ၌ နှစ်ဖက် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွား ခဲ့ပြီး ပလောင် အဖွဲ့မှ ရဲဘော် တစ်ဦးလက်မောင်း ဒဏ်ရာ ရခဲ့ကြောင်း တာဘုန်းကျော်က ဆက်ပြောသည်။
ထို့ပြင် ပြီးခဲ့သည့် မေလ (၁၄)ရက်နေ့ ညကလည်း မန္တလေး-လားရှိုး -မူဆယ် ပြည်ထောင်စု လမ်းမကြီး အရှေ့ ဖက်ရှိ ကွတ်ခိုင် မြို့နယ်၊ တာမိုးညဲ မြို့နယ် ခွဲရှိ မြန်မာ့ တပ်မတော်၏ ခလရ ၂၉၀ တပ်ဖွဲ့ဝင် တို့နှင့် ကချင် တပ်မဟာ (၄) လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း၊ TNLA ဗျူဟာ(၅) လက်အောက်ခံ တအာင်း ပျောက်ကျားတပ် (၃၃၅)နှင့် ကိုးကန့် MNDAA တပ်ရင်း (၃) တို့ပူးပေါင်း